Ex R/W Cabdi Weli Iyo Qaar Kamid Ah Kudlooyinka Baarlamnka Oo Madal Samaystay +Sawiro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Ex R/W Cabdi Weli Iyo Qaar Kamid Ah Kudlooyinka Baarlamnka Oo Madal Samaystay +Sawiro
Waxaa magaalada Muqdisho ee Caasimada dalka maanta kusoo idlaaday kulan labadii maalmood ee la soo dhaafay ka socday isla magaalada.
Kulanka oo ahaa mid u socday madal ay ku mideysanaayeen Siyaasiyiin caan ka ah dalka, waxa ayna doorteen marka uu soo idlaaday kulanka Gudoomiye uu yeelan doono Madasha Midnimada Dimoqraadiyada Soomaaliyeed.
Waxaa qeyb ka ah Siyaasiyiin, Xubno kamid ah Xisbiyada siyaasada, xubno kamid ahaa kudlooyinkii Baarlamaanka,waxaana gabagabadii Dhismaha Madashaas loo sameeyey Xaflad ballaaran oo ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee Bulshada Soomaaliyeed .
Xubnaha kulankaasi ka qeybgalay ayaa waxa ay halkaasi ku doorteen Gudoomiyayaasha Madasha Midnimada Dimoqoraadiyada waxaana kamid ah:-
1-Guddoomiyaha Madasha Midnimada Dimoqoraadiyada, ayaa waxaa loo aqoonsaday inuu noqdo Raiisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya C/wali Sheekh Axmed.
2-Guddoomiye ku-xigeenkiisu waxaa loo doortay Dr Cabdiraxmaan Macalin Cabdulaahi ”Baadiyow”
3-Gudoomiye ku Xigeenka Xuseen Carab Ciise.
4-Gudoomiye ku xigeenka Dr Cabdishakuur Shiikh Xasan Fiqi.
5-Xoghayaha Guud waxaa loo doortay Dr Cali Maxamed Maxamuud ( Cali Xareed ).
Guddoomiyaha Madasha Midnimada Dimoqoraadiyada Soomaaliyeed Dr Cabdiweli Shiikh Axmed oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in Ujeedkoodu yahay in la toosiyo qaladaadka jira, islamarkaana lagu abuuro Siyaasado cusub.
Dhanka kale, waxaa gabagabadii shirka ka hadlay gudoomiye xigeenada, waxa ayna ballan ku qaaden inay qaadi doonin talaabooyin wanaagsan.